Igama: I-Carbomer Carbopol Carbomer 10 yimpuphu emhlophe, i-polyacrylic acid enqamulelwe enamakholomu ohlelweni lwe-cosolvent oluthandwa ngobuthi. Izakhiwo zayo zokuzimanzisa kanye nothuli oluphansi kwenza kube lula kakhulu ukusetshenziselwa ukucubungula kahle. Kuyinto yokulungisa i-rheology esebenza kahle ngokweqile ekwazi ukuhlinzeka nge-viscosity ephezulu kanye namafomu akhazimulayo ama-gel acacile noma ama-gel-alcohol-gel kanye nama-cream. Ukuhamba kwayo okufushane, izakhiwo ezingadonsi zilungele ukufaka izicelo ezinjenge-gel ecacile, i-hydroalch
Igama: Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Carbomer1342 Carbopol1342 is a hydrophobically modified cross-linked acrylate copolymer. Inempahla ende yokugeleza okubonakalayo, inika ukuqina okuhle kakhulu nokumisa amandla ikakhulukazi ezinhlelweni ezi-surfactant kanye namafomu wokukhanya okukhazimulayo. Le mpahla yenza umkhiqizo ulungele ngokukhethekile izixazululo ezinamandla noma ukusabalalisa okuqukethe usawoti oncibilikisiwe. Ngaphezu kwalokho, ithuthukise ukuhambisana ekukhuliseni nasekudluliseni inani lesivuno ...
Igama: i-acrylic acid (ester) / i-C10-30 alkyacrylate i-polymer exhumene ne-carbomer 1382 isebenzisa i-cyclohexane ne-ethyacetate njengama-solvents, anganikeza ukumiswa nokuqina okufanayo njengeCarbomer1342. Njenge-rheologicamodifier encibilikiswa ngamanzi, inokusebenza okuhle kakhulu kokuqina kanye nokudluliswa kokukhanya ohlelweni lwamanzi oludakayo; Ngasikhathi sinye, umkhiqizo unokubekezelelana okuhle kasawoti nokuhambisana okuhle ne-surfactant; It ikakhulukazi efanelekayo inzalo ijeli. Amanzi Alcohogel, ...
Igama: I-Carbomer990 I-Carbopol990 I-Carbomer 990 I-Carbopol 990 iyinhlangano ehlanganiswe ne-polyacrylate polymer exhumene, ifakwe ipolymerized ku-co-solvent system ye-ethyl acetate ne-cyclohexane. Iyakwazi ukuhlinzeka nge-viscosity ephezulu, ukuqina okuhle kakhulu nokumisa ukusebenza ngomthamo ophansi. Ukuhamba kwayo okufushane (okungadonsi) kuhle kwezicelo ezinjengama-gel acacile, ama-hydroalcoholic gel, okhilimu. Uma ithathelwa phansi yi-alkali yakha amanzi acwebezelayo acwebezelayo noma ama-gel kanye ne-cream. ICarbomer990 iyi-cr ...
Igama: I-Carbomer Carbopol Incazelo I-Carbomer 276 iyi-polyacylate polymer enqamulelwe enekhono elinamandla lokuthambisa, esebenza njenge-thickener esebenza kahle kakhulu futhi enesisindo esincane, isisimamisi kanye nomenzeli omisiwe. Ingakhuphula inani lesivuno kanye ne-rheology yezinto eziwuketshezi, ngakho-ke kulula ukuthola izithako ezingenakunyibilika (igranual, iconsi likawoyela) elimiswe ngomthamo ophansi. Isetshenziswa kabanzi kuzinhlelo ze-HI & I nakulezo zakhiwo lapho ukuzinza kwe-oxidative nokusebenza kahle kwezindleko kuyizidingo ezisemqoka. C ...
Igama: I-Carbomer676 I-Carbopol676 I-Carbomer 676 I-Carbopol 676 i-polymer iyi-polymer ye-polyacrylic acid exhumene kakhulu. Inezici zokugeleza okufushane nokusebenza okuphezulu kwe-viscosity. Kunconywa ukuthi kusetshenziselwe ukunakekelwa kwesitsha okuzenzakalelayo, izinto zokuhlanza ubuso obunzima, amasistimu wokuhlanza ukunakekelwa kwasekhaya, okokubasa kwe-gel kanye nezinye izinhlelo ezijwayelekile zezimboni. Inokuqina okuhle kwe-viscosity lapho kukhona i-chlorine bleach futhi inokusebenza okuhle ezinhlelweni eziphezulu ze-pH. Izici Nezinzuzo zokugeleza okufushane ...
Isikhunta Yijie R-99 Yangaphakathi Okufakiwe Isikhunta Khipha Umenzeli Series01
Ukwakheka: ingxube yensimbi esekwe entweni yokwenziwa kokusebenza ngokuthinta Ukubuka kwangaphandle: impuphu emhlophe noma izinhlayiya Isikhathi sokugcina: iminyaka emibili Iphakheji: Isikhwama sephepha elihlanganisiwe le-Kraft Isisindo se-Net: 25 kg / isikhwama Uhlobo Lwenjoloba Osebenzayo Injoloba yemvelo (NR), injoloba ye-butadiene (BR ), IStyrene-Butadiene Rubber (SBR), Isoprene Rubber (IR), Neoprene Rubber (CR), Butyl Rubber (IIR), EPDM, chlorosulfonated polyethylene rubber (CSM), Fluororubber (FKM), irabha le-nitrile (NBR) nenjoloba eyenziwe kabusha ingasetshenziswa kumathayi a ...
Igama: Ama-Acrylates / i-C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Carbomer2020 iyi-polyacrylic acid copolymer exhumene. Inempahla ende yokugeleza okubonakalayo, inika ukuqina okuhle kakhulu nokumisa amandla ikakhulukazi ezinhlelweni ezi-surfactant kanye namafomu wokukhanya okukhazimulayo. I-NM-Carbomer2020 inamandla okuswakama ngokushesha kepha i-hydrate kancane, ingaholi ngezinga eliphansi kakhulu. Lesi sici senza kube lula ukuhlakazeka nokumpompa nokusingatha ngokuqhubekayo ngenxa ye-viscosity ephansi yokusabalalisa ngaphambi kwe-neutralizati ...
Igama: I-Carbomer996 I-Carbopol996 I-Carbomer 996 I-Carbopol996 iyi-Polyacrylate polymer exhumene. Isetshenziswa njengesishintshi se-rheology esisebenza kahle, esikwazi ukuhlinzeka nge-viscosity ephezulu, ukuqina okuhle kakhulu nokumisa ukusebenza ngomthamo ophansi. Ibuye isetshenziswe kabanzi kuma-lotion we-O / W nokhilimu njengommeleli omuhle wokumisa. Izici nezinzuzo Izakhiwo zokugeleza okufushane viscosity ephezulu ukumisa okwesikhashana, ukuqina nokuqinisa ikhono Izicelo ezinconyiwe Izitayela zezinwele zezinwele Moisturi ...
Igama: ICarbomer 981 Carbopol 981 Carbomer 981 Carbopol981 iyi-polyacrylate polymer exhumene nesiphambano. Isebenza ngokufana neCarbomer 941. kepha ifakwa ipolymerized ku-co-solvent system ye-ethyl acetate ne-cyclohexane. Izici Nezinzuzo Impahla yokugeleza okude okuvelele Isebenza kahle kakhulu ekugxilisweni okuphakathi nangaphansi. Ukucaca okuphezulu Izicelo Ezinconyiwe Ama-lotion, okhilimu nama-gel Sula ama-gel Sula amasistimu we-ionic ngokulinganisela Izinkombandlela ze-Formula Izinga elijwayelekile elinconywayo ku-0.2 ~ 1.5%. Ukunga ...
Igama: ICarbomer Carbomer 980 Carbopol 980 iyi-polyacrylate polymer exhumene nesiphambano, ifakwe ipolymerized ku-co-solvent system ye-ethyl acetate ne-cyclohexane. Iyakwazi ukuhlinzeka nge-viscosity ephezulu, ukuqina okuhle kakhulu nokumisa ukusebenza ngomthamo ophansi. Ukuhamba kwayo okufushane (okungadonsi) kuhle kwezicelo ezinjengama-gel acacile, ama-hydroalcoholic gel, okhilimu. Uma ithathelwa phansi yi-alkali yakha amanzi acwebezelayo acwebezelayo noma ama-gel kanye ne-cream. Izici Nezinzuzo flo iDemo ...
Igama: ICarbomer 941 Carbopol 941 Carbomer 941 Carbopol941 iyi-polyacrylate polymer exhunywe enqamula phakathi enezimpahla ezihamba isikhathi eside ezigqamile emgqeni. Inikeza ukucaca okuhle kakhulu kuma-gel futhi inikeze ama-emulsions unomphela nokumiswa ku-viscosity ephansi, noma ngabe kunezinhlelo ze-ionic. ICarbopol941: ukugeleza okude, i-viscosity ephansi, ukucaca okuphezulu, ukumelana ngokulingene ne-ion nokumelana ne-shear, efanelekile ku-gel kanye ne-emulsion. Izici Nezinzuzo Ezihamba phambili impahla yokugeleza okude isebenza kahle kakhulu ngokulinganisela futhi bheka ...